कृमा अनमोलको एक्सन अवतार « News of Nepal
कृमा अनमोलको एक्सन अवतार
नायक अनमोल केसी हिजोआज किन कतै देखिँदैनन्? किन उनी कुनै सभा–समारोहमा गइरहेका छैनन्? यस्ता प्रश्नको एउटै जवाफ हो उनी पछिल्लो समय अहिलेसम्मकै महँगो र महत्त्वकांक्षी फिल्म कृमा काम गरिरहेका थिए।
कृमा उनी अहिलेसम्मकै फरक र भिन्न लुक्समा देखिँदै छन्। जसका लागि कृको निर्माण समूहले उनलाई बेग्लै प्रशिक्षकको व्यवस्था गरी लामो समयसम्म जिमलगायतका शारीरिक अभ्यास गराएर सिक्सप्याक बडी बनाउन लगाएको थियो भने हेयर स्टाइल पनि परिवर्तन गराएको थियो। अनमोलको क्रेजका कारण सुटिङ गर्नै समस्या भएपछि कृको निर्माण समूहले सुटिङ अवधिभर २४ घण्टै ४ निजी बडी गार्डको व्यवस्था गरेको थियो। कृको निर्माण समूहको आग्रहमै अनमोल आफूले यस फिल्मका लागि बदलेको लुक्स पहिल्यै लिक नहोस् भन्नका लागि कतै निस्किरहेका थिएनन्। तर, अब भने कृमा देखिने अनमोलको लुक्स सार्वजनिक भएको छ।
फिल्मको निर्माण संस्थाले केवल नायक अनमोल केसीलाई मात्र समावेश गरेर यसको फस्टलुक सार्वजनिक गरेको हो। कृको फस्टलुकमा अनमोल लामो कपाल पालेर एक्सन अवतारमा देखिएका छन्। लभर ब्वाइको रूपमा स्थापित अनमोल यो फिल्ममा भने एक्सन हिरोको रूपमा देखिनेछन्। आगामी कात्तिक ३ गते अल नेपाल रिलिज हुने फिल्मका निर्माण लागत हालसम्म झण्डै साँढे २ करोड पुगिसकेको छ भने रिलिजसम्म यो लागत बढ्नेछ। निर्माता सुवास गिरीको सुवास इन्टरटेन्मेन्टको निर्माण तथा नायक, निर्माता एवं निर्देशक भुवन केसीको द सुपर काजोल फिल्म्स्को प्रस्तुतिमा निर्माणाधीन फिल्ममा अनमोल केसी, अदीति बुढाथोकी, अनुपविक्रम शाही, कामेश्वर चौरासिया, सरोज खनाल, रूपा राना, लक्ष्मी गिरी, अमित गिरी, सुदामलगायतका कलाकार मुख्य भूमिकमामा छन्।
सुवास गिरी र भुवन केसीको निर्माण, कमल गिरी कार्यकारी निर्माण र श्री पराजुलीको सहनिर्माणमा निर्माणाधीन फिल्ममा कथा, सम्पादन र निर्देशन सुरेन्द्र पौडेलको रहेको छ भने प्रदीप भारद्वाज र आशिष रेग्मीको पटकथा र संवाद, अल्मोडा राना उप्रेती र विशेष श्रेष्ठको संगीत, रेनशा बान्तवा राईको कोरियोग्राफी, चन्द्र पन्तको द्वन्द्व र पुरुषोत्तम प्रधानको छायांकन रहेको छ। फिल्मले अहिले नै ओभरसिज राइट्सका लागि राम्रो रकम पाइसकेको छ। सुवास र भुवनले कृ वर्षकै बहुप्रतिक्षित फिल्म हुने आशा राखेका छन्।